Umcimbi wezimbongi e-Bessie Head | News24
Umcimbi wezimbongi e-Bessie Head
ISITHOMBE: SIthunyelweuScelo Mpungose ongomunye ozobe ekhona kulomcimbi.
ZIZOSINA zidedelane izimbongi eziphuma kusona sonke isifundazwe saKwaZulu-Natal emcimbini wezimbongi owethiwe “Love potion poetry show” ezoba emtapweni wolwazi i-Bessie Head ngomhlaka 3 kuNdasa ngehora lokuqala emini kuze kube ihora lesihlanu ntambama.
Lo mcimbi uhlelwe i-IPDP ngokuhlanganyela neGubhela Brands ngokuxhaswa uMnyango wezoBuciko kanye namaSiko (Department of Arts and Culture). Imali yokungena kulo mcimbi uR50 umuntu ngamunye.
UNdunduzo Mkhize weGubhela Brands uthe inhloso yalo mcimbi ukunikeza izimbongi ezahlukene ikakhulukazi ezidabuka eMgungundlovu nezindawo ezizakhele ithuba lokubonakalisa ithalente lazo.
“Siyaqala ukuthi senze umcimbi onjengalona kusanda kuqala unyaka sijwayele ukuwenza ngenyanga kaMandulo [September].
“Sibonile ukuthi umcimbi owodwa ngonyaka awunikezi wonke umuntu ithuba lokuthi bazibonakalise njengezimbongi.
“Sifuna ukunikeza wonke umuntu ithuba lokuqhakambisa ubuciko bakhe.
“Asifuni ukuthi izimbongi zethu zigcine seziyofuna amathuba ngaphandle sibe sikhona singakwazi ukubasiza.Sifuna baqale la ekhaya ngaphambi kokuba baphumele ngaphandle. Enye into futhi sizama ukukhulisa indaba yezinkondlo. Indima yezinkondlo isafufusa kanti nathi sifuna kube khona iqhaza libambayo ukulekelela,” kusho yena.
UMnu Mkhize uthe enye into bafuna ukugqugquzela abantu ukuthi beseke izimbongi njengoba nazo zithathwa njengamaciko.
“Izimbongi zinokungahlonipheki okuphuma ikakhulukazi kubahleli bemicimbi.Umuntu afike akubize athi woza emcimbini wakhe uyakuqasha kodwa futhi akutshele ukuthi akanamali.
“Nathi lento esiyenzayo siyenza ngothando kodwa futhi nemali siyayidinga.Iizmbongi eziningi ezinethalente elimangazayo zize zikhethe ukuyeka ithalente lazo zihambe ziyofuna imisebenzi ngisho ezitolo ngoba zibalekela ukuxhashazwa abahleli bemicimbi.
“Njengoba kungenwa ngemali kulo mcimbi indlela esiqala ngayo ukuthi sikhombise abantu ukuthi kufanele bazi ukuthi kuyakhokhwa.”
Amathikithi azotholakala emnyango.